Global Voices teny Malagasy » India : Bebe Sy Zafikely Vavy Miaraka Manao Fampitambaovao Mahafinaritra · Global Voices teny Malagasy » Print
India : Bebe Sy Zafikely Vavy Miaraka Manao Fampitambaovao Mahafinaritra
Voadika ny 01 Jolay 2016 4:09 GMT 1	 · Mpanoratra Rezwan Nandika Nancy
Sokajy: Azia Atsimo, India, Mediam-bahoaka, Sakafo, Saripika, Vaovao Tsara, Zavakanto & Kolontsaina
Miss Pickles 2010. Sary avy amin'ny indrimspickles.com
Vavy antitra iray manao aron'akanjonà labaoratoara no manatrika fakàntsary. Dr Indri Pickle no anarany, ary hazavainy amin'ny mpijery ny fomba fanaovany manga alòna  izay ankafizin'ny olona any amin'ny firenena any Azia Atsimo. Soratany eo amin'ny solaitraben'ny Pickle Lab ny raikipohy fototra : masoandro + manga.
84 taona izao i Dr. Indri Pickle. Inderjit Kaur  no nafohezina hoe Indri, tsy tena manampahaizana manokana momba ny manga alòna izy. Ao aminà lahatsary  izay vao nampiakarina vao haingana ao amin'ny Youtube no ilalaovany. Amin'ny alàlan'ny fanampian'ireo fitaovan'ny haino aman-jery sosialy toy ny YouTube, bilaogy , Twitter  ary Facebook – ary koa ny zafikeliny vavy Jasmeen Patheja  — no anatanterahan'i Indri ireo nofinofiny ho tonga mpilalao sarimihetsika.
Te-hianatra ny fomba fakàna sary sy fanaovana lahatsary i Jasmeen, izay mpanakanto, mpiaro ny miralenta sady mpamorona ny Blank Noise , kanto iarahan'ny vahoaka sy ny fiarahamonina mientana, izay tojo ny filàna sotasota amin'ny vehivavy eny an-dàlambe. Ny renibeny, te-ho tonga mpilalao sarimihetsika, no lasa mpilalao an-tsitrapo sy mpiara-miasa aminy. Ankoatry ny lahatsarin'ny Pickle Lab dia niaraka namokatra fampisehoana andian-tsary mifototra amin'ny toetoetry ny olona nofidian'i Indri holalaovina ry zareo.
Zarain'i Indri ao amin'ny bilaoginy  ihany koa ny tantaram-piainany. Tantarainy ao amin'ilay lahatsoratra fa teraka sy lehibe tany Birmania izy ary tsroany ireo fanafihan'ny Japoney nandritra ny Ady Lehibe faharoa tamin'ny fahazazany. Tantarainy ny dia lavitrezaka nataon'ny fianakaviany mba hifindràna any India (Lahore) tamin'ny 1941. Niverina tany Magok, Birmania izy taorian'ny Ady Lehibe Faharoa. Nanambady i Indri rehefa 19 taona ary niaina tany Birmania hatramin'ny 1970.
Niresaka tamin'i Indri sy Jasmeen ny Global Voices mba hahalalàna bebe kokoa momba ny asan'izy ireo.
Global Voices (GV): Nampianarinao ny renibenao ve ny fampiasàna haino aman-jery sosialy ? Inona ireo zava-tsarotra natrehany ?
Jasmeen Patheja: Tsy nampianatra azy ny fampiasàna ny haino aman-jery sosialy aho, fa teo aho nampahafantatra na nanampy azy tamin'ny fanazavana ny hevitra, ny fomba fiasa ary ireo karazana firotsahana an-tsehatra amin'ny tranonkala. Mahafinaritra ahy fa mampiasa YouTube matetika izy mba ‘hivezivezeny’, mitsidika ny zaridaina zen japoney amin'ny Youtube izy, na mampiasa ny YouTube mba hianarana ny fanaovana bonsai. Ampiasainy hihainoana ny hirany maraina ihany koa ny YouTube. Ny ankamaroan'izany dia tao anatin'ny taonan'ny tsy fahalalàna sy ny fahitàna habaka vaovao amin'ny tranonkala toy ny YouTube, ny Facebook, ny Twitter. Manelanelana aho rehefa manana fanontaniana momba ireo karazana habaka izy, ohatra ” inona no maha samy hafa ny Instagram sy ny Twitter sy ny Facebook sy ny Tumblr ?”, misy endriny samy hafa, ary samy manana ny fomba fiasany. Mora foana tamin'i Indri ny nampiasa ny Facebook, Google, YouTube, WhatsApp. Hatrany am-boalohany, dia nianatra nampiasa ny paint, ny Microsoft Word, milalao karatra (solitaire), ary mandefa firariantsoa amin'ny aterineto i Indri.
Mipetraka irery ary tsy miankindoha i Indri. Mahafinaritra azy fa ahafahany mampiasa ny vavahadin-tserasera ny aterineto mba hiantsenana sy hividianana ireo vokatra (Flipkart/Bigbasket). Amin'izao fotoana izao, tena te-hianatra ny fanaovana famandrihana tapakila hivezivezena izy !
Nanontaniako ny amin'izay hitany fa manahirana azy i Indri, ny fiteny sy ny voambolana no navaliny.
Indri Kaur: Mianatra izao tontolo izao, nahoana aho no tsy hianatra ? Mbola maro ny zavatra tsy maintsy hianarako. Zava-dehibe ny miara-mamindra amin'ny tontolo.
Indri milalao ao anatinà sary fampisehoana. Sary avy amin'ny indrimspickles.com
GV: Inona no nanosika anao ho tonga amin'ity hevitra ity sy hiroso amin'ity hetsika ity ?
Jasmeen Patheja: Te-haka sary aho. Te-ho mpilalao sarimihetsika ny renibeko. Niara-niasa an-taonany maro izaho sy ny renibeko.
Nianatra tamin'ny sekoly fianarana zavakanto, tamin'ny sampana sary/ kanto iombonana ihany koa aho. Ny fanirian'i Indri ho mpilalao sarimihetsika no niandohan'ny fiaraha-miasa. Nitarika ho amin'ny fifanakalozana izany hevitra izany. Nahaforona fampisehoana andian-tsary mifototra amin'ny toetran'olona tian'i Indri holalaovina izany. Teraka tamin'ny lalao, ny kiry ary ny faniriana ilay fiaraha-miasa.  Mpanjaka vavy, mpanao politika, mpahay siansa no nasehon'ilay fampisehoana.
Miara-miasa izahay satria tianay ilay raharaha. Samy mihevitra izahay fa ” tsy mahomby amin'ny filalaovana sarimihetsika sy fakàna sary”, fa mampivoatra anay izany. Mahasambatra anay izany.
Nivoaka tamin'ny fampisehoana andian-tsary goavana indrindra ny Indri Pickle Lab. Eto Indri dia milalao ny mpahay siansa mandòna manga ao amin'ny laboratoarany. Tonga ho azy ilay hevitra, nefa koa avy amin'ny fijerena ny fomba fanaovana zavatra alòna, ny fitandremana fatratra, ny siansa, ny asa sy ny fizaràna fahalalàna.
Jasmeen Patheja miaraka amin'ny renibeny Indrajit Kaur. Sary avy amin'ny indrimspickles.com
GV: Ahoana no navalin'ny ny mpamaky anareo ?
Jasmeen Patheja: Valiny tena mampihetsi-po sady mamporisika ihany koa. Noho io fiarahamiasa io dia nahazo mpinamana vaovao izahay sy i Indri. Namaly tamin'ny fomba mahagaga, famporisihina, fanehoana matetika ny faniriana hiarahana miasa amin'ireo zafikeliny vavy ihany koa no namalian'ireo vehivavy (naman'ny fianakaviana sy fianakaviana lavitra) mitovy taona amin'i Indri anay.
Tamin'ny 2010, niaraka izahay nandeha tany amin'ny toerana misy ny Akademie Schloss Solitude [ Tetikasa Alemàna momba ny kanto ao amin'ny toerana fonenana ], fikambanana izay nanohana io fiarahamiasa io hatrany amboalohany.
Tamim-pitiavana sy famporisihina no namalian'ny mpamaky anay ary tena faly izahay satria noraisina tamim-pitiavana ny zavatra noforoninay.
Maka aina i Indri. Sary avy amin'ny indrimspickles.com
GV: Maro amin'izao taranaka misy antsika izao no tsy mifandray amin'ireo havany antitra satria efa mivakivaky ny fianakaviana ary mipetraka mifanalavitra ny olona. Ahoana no ahafahan'ny haino aman-jery sosialy sy ny fitaovan'ny web mampifandray ?
Jasmeen Patheja: Miparitaka manerana ireo tanàna sy ny firenena ny fianakaviako. Any Bangalore aho no mipetraka. Any Calcutta ny renibeko. Amin'izao fotoana izao, tsy mbola nahita ny zafikeliny lahy ny renibeko tao anatin'ny roa taona, sady tsy mbola nahita ny ny zafiafiny vavy dimy volana. Mitarika azy amin'ny fampiasana ny web ny faniriany hifandray. Eny, afaka fenoina amin'ny alàlan'ny aterineto ny banga.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/07/01/83904/
 manga alòna: https://en.wikipedia.org/wiki/Mango_pickle
 Inderjit Kaur: https://twitter.com/indripickles
 Facebook : https://www.facebook.com/indri.ms.pickles/
 Jasmeen Patheja: https://twitter.com/jasmeenpatheja
 Blank Noise: https://en.wikipedia.org/wiki/Blank_Noise
 fampisehoana andian-tsary : http://indrimspickles.com/